Mpahay traikefa: Sehatra Marketing Cross-Channel | Martech Zone
Alahady Oktobra 20, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Sehatra fifampizarana fiampitana ampiasain'ny Experian Marketing Services manome fahefana ny marika hitantana sy hanatanteraka ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny rafitra iray, amin'ny fotoana tena izy - manala ny filana sehatra maro samihafa sy tsy mitovy amin'ny mpivarotra fantsona tsirairay. Ny sehatra dia ahafahan'ny marika mampiditra fampahalalana mora foana an'ny mpanjifa avy amin'ny loharanom-baovao rehetra mba hamoronana fifandraisan'ny mpanjifa mahira-tsaina sy mahomby kokoa amin'ny mailaka, finday, sosialy, tranonkala, dokam-barotra pirinty sy fampisehoana.
Ny Platform Marketing Experian Cross-Channel dia manolotra:
Fampidirana data - Mahazoa fahitana tena lehibe amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fampidirana ny angon-drakitra mpanjifa avy amin'ny loharano rehetra, ary ny fametrahana ny hevitry ny mpanjifa manam-pahaizana Experian Marketing
Fitantanana fampielezan-kevitra ampita - Tantano afovoany ny fampielezana ny lakroa rehetra ary alefaso am-pilaminana ny traikefa marika tsy miovaova amin'ny mpanjifanao
Fitantanana ny fifandraisana - Raiso ny valintenin'ny mpanjifanao sy ny fihetseham-pony, avy eo araraoty avy hatrany izany data izany mba hifaneraserana amina fotoana fohy hifaneraserana sy hifaneraserana
Iray amin'ireo teboka navoakan'i Experian ao amin'ny bokikely fivarotana amoron-tsiraka ny lakile… tsy hitan'ny mpanjifanao fantsona, mahita marika tokana izy ireo. Vokatr'izany dia mila mahazo antoka ianao fa mandrindra ny ezaka manerana ny fantsona mba hampihenana ny fihenam-bidy, hahafantatra ny mpanjifa na aiza na aiza misy azy ireo, ary hiresaka amin'izy ireo manokana sy araka ny tokony ho izy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny marikao.
Tags: cross-fantsonavarotra ampitan-tseraserasehatra marketing hafaandrana
22 Nov 2013 amin'ny 1:55 maraina
Vao haingana aho no tena ambany vola ary ny trosa dia mihinana ahy amin'ny lafiny rehetra! IZAO mandra-panapahako hevitra dia hahazoam-bola amin'ny Internet. Nandeha tany amin'ny surveymoneymaker dot net aho, ary nanomboka nameno vola tamin'ny fanadihadiana, ary azo antoka fa afaka nandoa ny faktiorako !! Faly be aho, nanao an'io !! Miaraka amin'ny fihenjanana ara-bola mandritra ny taona maro, manantena aho fa hanome azy fotoana rehetra ianareo. - vttm
Jan 4, 2014 ao amin'ny 5: 15 AM
aJ5u - Ny taona vitsivitsy lasa izay dia ambany dia ambany amin'ny vola aho ary ny trosa dia namono ahy tamin'ny lafiny rehetra! Marina izany mandra-pianarako mamorona vola .. amin'ny INTERNET! Nidina an-tsokosoko tao amin'ny pointmoney aho, ary nanomboka nanao fanadihadiana momba ny vola, ary nanao izany, afaka nanao zavatra bebe kokoa aho !! Faly aho fa nanao an'io !!! Miaraka amin'ny fihenjanana ara-bola mandritra ny taona maro, manantena aho fa hanome azy fotoana rehetra ianareo. r04O